Sheekh Shariif oo bilaabey qabashada Shaqo looga baahnaa Farmaajo+SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News Sheekh Shariif oo bilaabey qabashada Shaqo looga baahnaa Farmaajo+SAWIRRO
Sheekh Shariif oo bilaabey qabashada Shaqo looga baahnaa Farmaajo+SAWIRRO
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa xalay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu kulamo gooni gooni ah kula qaatay Guddoomiyeyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Sheekh Shariif ayaa kulamada uu la qaatay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa ku wehlinaayay Xildhibaanada labada Golle ee Baalamaanka ee ku jira xisbiga Himilo Qaran,waxaana looga hadlay arrimo kala duwan.
“Waxaan si guud uga wada hadalnay xaaladda guud ee dalka, innaga oo si gaar ah diiradda u saarnay taageerista xisbiyada iyo dhismahooda, nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2020/2021 iyo khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulada dalka”ayuu yiri Sheekh Shariif oo la kulmay Guddoomiye Mursal.
Dhinaca kale kulankii uu la qaatay Guddoomiyaha Aqalka sare ee dalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka,isla markaana waxaa kulanka si gaar ah diirada lagu saaray Khilaafka labada Golle iyo sida xal looga gaari karo, dhamaystirka dastuurka KMG ee dalka.
Sdioo kale labada Mas’uul ayaa ka wada hadlay arrimaha Doorashooyinka 2020/2021 dalka ka dhacaya iyo sidii ay u noqon lahaayeen kuwa xor ah oo xalaal ah, dhismaha xisbiyada iyo dhiiragalintooda iyo ugu dambeyntii xalinta khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe iyo dowlad Goboleedyada dalka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa tan iyo markii uu soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kulamo gooni gooni ah la qaadanayay Mas’uuliyiin kala duwan oo dalka ku sugan.
Previous articleMidowga Yurub oo cunaqabateynta ku kordhiyay Mayanmar
Next article“Waxaan U baaha nahay Boqolaal ilhaan cumar oo kale ah”+VIDEO
Xildhibaan COSOBLE: “Dastuurka Maqaamka Muqdisho lagu dhisi lahaa waan diyaariney”
DAAWO Dowladda Soomaaliya oo sheekgtay inay siidaysay Markabkii xoolaha siday ee...